जब ब्रेनको ट्युमर निकाल्दा निकाल्दै बिरामीले गाइन यस्तो गीत • Health News Nepal
नमराज भट्ट काठमाडौं, ०९ पौष २०७७ (यो समाचार हाम्रो पडकास्टमा पनि सुन्न सकिन्छ)
सुनसरी रामदेवी नगरपालिका वडा नम्बर ४ बस्ने २८ वर्षिय दीपिका डाँगीलाई २ महिना अगाडि दाहीने शरीर बाङ्गो भएर बेहोस भईन । उपचारको लागि नजिकै विराटनगर जानुभयो। विराटनगर नोबेल अस्पतालमा पुगेपछि उहाँलाई डाक्टरले MRI गर्न लगाउनुभयो। । MRI को रिपोर्ट आएपछि ब्रेन ट्युमर शल्यक्रिया गर्नुपर्ने रहेछ ।
त्यहाँ सम्भव नभएपछी वीर अस्पतालमा‌ उपचारको लागि आउने निर्णय गरेकी थिइन्न । वीर अस्पतालमा एक हप्ता अगाडि शल्यक्रिया गर्नको लागि भर्ना भइन । एक हप्तापछि शल्यक्रिया गर्ने सहमति भयो। शल्यक्रिया गर्नु भन्दा अगाडी डाक्टरहरूको सुझावमा होसमै शल्यक्रिया हुन्छ भन्ने परामर्श भयो। अधिकांश शल्यक्रिया गर्नको लागि धेरैजसो बेहोस पारेर गरिन्छ तर उहाँको होसमै शल्यक्रिया गर्ने निर्णय भएको थियो।
यतिमात्र होइन शल्यक्रिया गर्दागर्दै बिरामीले गीत पनि गाएकी छिन्। जुन गीत थियो फूलको आँखामा फुलै संसार । यो गीत गाएर आफूखुसी भएको डांगी बताउँछिन्। डाँगी भन्नुहुन्छ यस्तो पनि मेरो शल्यक्रिया होसमै हुन्छ भनेर सोचेकी थिइन डाक्टरहरूको सल्लाहमा शल्यक्रिया गर्नु भन्दा अगाडि मसँग धेरै कुरा राख्नुभएको थियो।
अन्तमा त्यही भएको रहेछ, एनेस्थेसिया डाक्टरहरूको सल्लाह र सुझावमा भएको थियो। जुन शल्यक्रिया चार घण्टाको हुन्छ भनेर बिरामीसँग परामर्श र जानकारी पहिले नै गराउनुभएको थियो । तपाईंलाई होसमै राखेर शल्यक्रिया गर्छु भन्दा म धेरै डराएकी थिए डाँगी भन्छिन् ‌ । नडराउनु होला, पहिला पनि यस्तो शल्यक्रिया भइसकेको छ तपाईं जवान हुनुहुन्छ भन्ने सम्झाउनु भयो ।
“त्यसपछि मेरो हिम्मत आयो र मनमा पनि डर कम भयो त्यसपछि यस्तो होसमै शल्यक्रिया गर्न पाउँदा म धेरै खुसी छु। यो शल्यक्रिया गर्दा मलाई सबै थाहा छ शुरुमा मेरो टाउकोमा १२ ओटा सुइ लगाउनु भयो। त्यो बेलामा पुरै होसमा‌ थिए । सूई हान्दा टाउको माथिको भाग लट्टिएको थियो। त्यसपछि डाक्टरहरूले गित गाउँन लगाउनुभयो , मैले शल्यक्रिया गर्नु भन्दा अगाडि नै भनेकी थिएँ थिए आनी छोइङ डोल्मा कै गित गाउँछु भनेर । अन्तमा मेरो आमाबुबा दाजुभाइ डाक्टरहरुको सहयोगमा मैंले सफल शल्यक्रिया गर्न पाउँदा म खुसीका साथ आज डिस्चार्ज पछि घर फर्किदै छु।”
शल्यक्रिया गर्ने डाक्टरहरुमा प्रा.डा.राजीब झा , डा.प्रदीप कोइराला, डा.अनुज जंग कार्की ‌लगायत रेजिडेन्ट डाक्टरहरु थिए।
प्रा.डा.राजीब झा, बरिष्ठ न्यूरोसर्जन सँगको कुराकानी
१) सुन्दा मानिसहरू लाई अचम्म लाग्न सक्छ ! बिरामीको होसमै शल्यक्रिया गर्नु कसरी आँट आयो ?
Awake Craniotomy लाई नेपालीमा बिरामीलाई होसमै राखेर शल्यक्रिया गर्नु भन्ने बुझिन्छ। धेरै जसो ब्रेन ट्युमरको अप्रेसन गर्नु भन्दा पहिले पूर्ण रुपमा बिरामी लाई बेहोस पारेर अप्रेशन गरिन्छ । तर बिरामीलाई होसमै राखेर शल्यक्रिया गर्न धेरै चुनैतीहरु हुन्छन्। अप्रेशन सम्बन्धिका डाक्टरहरले बिरामी लाई होसमै राखेर बिभिन्न कार्यहरू गर्न लगाउँछौ। बिरामीलाई बोल्न लगाउँछौ।
बिरामीसँगको सल्लाह र परामर्श अनुसार कसैलाई हात त कसैलाई खुट्टा चलाउन पनि लगाउँछौ। बिरामीको आँखाको भिजन कस्तो छ त्यस अनुसार हामीले बिरामी सँग कुरा गर्दै अप्रेशन गर्छौं। यसको फाइदा के हुन्छ भने यदि प्यारालाइसिस जस्तो देख्यो भने त्यो अरु प्रविधिबाट सहज देखिदैन। लक्षण भएर बिरामी लाई होसमै राखेर अप्रेशन गर्छौं।
२) बेहोस गरेर र बेहोस नगरेर शल्यक्रिया गर्दा के फरक पर्छ ?
धेरै फरक पर्छ , किनभने मान्छेलाई मान्छेलाई बेहोसमा अप्रेशन गर्दा खेरी बोल्दैन चल्दैन तर हामी फिक्स अवस्थामा राखेर १२ देखि १६ घण्टा अप्रेशन गर्न सक्छौं। तर होसमै भएको बिरामी लाई चाहिँ अप्रेशन गर्न त्यति सहज छैन। यसमा विभिन्न चुनौती र संघर्ष हुन्छन् । कहिलेकाहीँ बिरामी लाई खोकी, हाच्छियुँ आउछ भने दिमाग बाहिर निस्कने सम्भावना हुन्छ। किनभने अप्रेशन गर्दा खेरी टाउकोबाट सानो हड्डी निकालेर गर्नुपर्ने हुन्छ। बिरामीले कराउँदा, खोक्दा रिस्क हुन्छ तर जति रिक्स भएपनि डाक्टरको हातमा‌ हुन्छ ।
३) यस्तो शल्यक्रिया नेपालमा‌ पहिलो पटक भएको हो ?
यो होसमै राखेर गरिने शल्यक्रिया पहिलो पटक होइन, यस्तो शल्यक्रिया हुन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । सामाजिक सञ्जाल र प्रचार प्रसारको कमीको कारणले धेरै मानिसहरू लाई थाहा नपाएको मात्रै हो। नेपालको वीर अस्पताल लगायत अन्य बाहिरी अस्पतालमा पनि यो अप्रेशन गरिएको छ। जुन हामीले करिव १५ देखि १६ सम्म अप्रेशन गरेका छौँ।
४ ) बिरामीले गीत गाउँदै शल्यक्रिया गर्न डाक्टरलाई डिष्टब हुँदैन?
बिरामीले यदि शान्तिपूर्ण तरिकाले गीत गाउँछन् केही पनि डिष्टब हुँदैन हामीले हेर्न खोजेको वास्तवमा त्यँही हो । हामी शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर लाई रमाईलो हुन्छ । कहिलेकाहीँ अपवादको रुपमा गाह्रो भएपनि त्यसको सामाधान गर्न‌पनि सकिन्छ।
५) ब्रेन ट्युमर को शल्यक्रिया गर्न कतिको सहज छ ?
ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया गर्न हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै चुनौती हुन्छन् । ब्रेन ट्युमरको पनि वैज्ञानिक कुरा गर्ने हो भने जोखिम मानिन्छ किनभने यस्तो किसिमको शल्यक्रिया गर्दागर्दै ब्रेनको सानो समस्या आउँदा खेरी पनि प्यारालाइसिस हुने देखि लिएर ज्यान जान सक्ने सम्म हुन्छ। त्यसैले गर्दा अरु सर्जरीको तुलनामा ब्रेन ट्युमरको सर्जरी गर्न सहज छैन।
६) कोभिडको समयमा ५ देखि ६ घण्टा लगाएर शल्यक्रिया गर्दा जोखिमपूर्ण हुँदैन?
अवश्य पनि जोखिम हुन्छ । आफ्नो प्रोफेसनल गर्दा पनि Frist priority बनेको बिरामीले गर्दा हामीले हरेक स्थितिमा काम गर्नुपर्छ। कोभिडको समयमा पनि अधिकतम रुपमा हाम्रा दायित्व पूरा गरेर काम गरिरहेका छौं। वास्तवमा यस्तो कोभिडको समयमा काम गर्दा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर र बिरामीको तर्फबाट कोभिड नसरोस भनेर सुरक्षा का नियमहरू पालना गरेका हुन्छौं।
Tags: Bir HospitalProf Dr Rajiv Jha
Pingback: डा. विष्णु मूर्ति भट्टराईको नयाँ गीत 'घरबार' सार्बजनिक • Health News Nepal
Pingback: सुदुरपश्चिमकै पहिलो पटक निसर्ग हस्पिटलमा ब्रेन ट्युमरको सफल उपचार #Nisargahospital • Health News Nepal
Pingback: भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा ३५ किलोको ट्युमर निकालियो • Health News Nepal